Imizobo - Imagazini yoyilo
Iilebheli Le ingqokelela yeVodka yeVodka yakudala iphinda ivuselele iVodka yakudala yaseLithuania yokwenza amasiko. Uyilo lwenza ukuba imveliso endala isondele kwaye ibalulekile kubathengi ngeli xesha. Ibhotile yeglasi eluhlaza, imihla ebalulekileyo yokwenza i-vodka yaseLithuania, amabali asekwe kwinyani yokwenyani, kunye neenkcukacha ezimnandi, ezinokubamba ngamehlo - indlela egudileyo yokusika ikhumbuza iifoto ezindala, ibha yesaladi ezantsi ehambelana nokubumbana kweklasikhi yeklasikhi. Iifonti kunye nemibala edlulisela ubunjani benkqutyana nganye-zonke zenza ukuba ingqokelela yevodka yesiqhelo ibe mthethweni kwaye inomdla.
Ikhalenda Sakha iidolophu kunye nawe. Umyalezo ukuba i-NTT East Japan yeNkampani yokuThengisa ukuKhuthaza ukuThunyelwa kwiikhalenda zedesika. Inxalenye ephezulu yamashiti ekhalenda kukusika kwizakhiwo ezinemibala kwaye amaphepha agqithisileyo enza idolophu enye eyonwabileyo. Yikhalenda umntu angayonwabela ukutshintsha indawo yomgca wezakhiwo inyanga nenyanga kwaye kukuzalisa ngemvakalelo yokuba uhlale wonwabile unyaka wonke.
Ikhalenda Le khalenda yedesika eyenziwe ngoqulunqo lwangaphandle oluneminqweno yamaxesha onyaka kumdlalo wobugcisa obukhethekileyo. Amagqabantshintshi oyilo kuxa kubonisiwe, ii-motifs zonyaka zibekwa kwikona yeedigri ezingama-30 ukubonwa okuhle. Le fomu intsha iveza inoveli ye-NTT COMWARE yenovela yokuvelisa imibono emitsha. Ukucinga kunikwa ukusebenza kwekhalenda enesithuba esaneleyo sokubhala kunye nemigca elawulwayo. Kulungile ukuba ujonge ngokukhawuleza kwaye kulula ukuyisebenzisa, uncamisa imvelaphi uyibeka ngokwahlukileyo kwezinye ikhalenda.
Uthuli Kunye Nomtshayelo
Uthuli Kunye Nomtshayelo I-Ropo yinto yokuqhekeza uthuli kunye nomqondo womtshayelo, ongaze uwele phantsi. Ngenxa yesisindo esincinci seetanki zamanzi ezikwigumbi elisezantsi le-dustpan, iRopo izigcina ilungelelene ngokwemvelo. Emva kokutshayela ngokulula uthuli ngoncedo lomlomo othe tye lwothuli, abasebenzisi banokuyihlutha imfumba kunye nothuli kunye kwaye bayibeka kude njengeyunithi enye ngaphandle kokukhathazeka kwayo ukuba iwele phantsi. Uhlobo lwangoku lwezinto eziphilayo lujolise ekuziseni ulula kwizithuba zangaphakathi kunye nethambeka elibuthathaka elinyibilikayo ukuzonwabisa ukonwabisa abasebenzisi ngelixa ucoca umgangatho.
Iilebheli Ikhalenda Ikhalenda Uthuli Kunye Nomtshayelo Iileyibhile Ye Wayini Ukupakisha Iziselo Ezithambileyo